Ungayisebenzisa kanjani i-iOS 10 yokuvala isikrini (I) | Ngivela kwa-mac
Ngohlelo olusha lokusebenza IOS 10 manje isiyatholakala, abasebenzisi abaningi bayakujabulela ukungena kuzinguquko ezinkulu kakhulu, njengohlelo lokusebenza lwemilayezo oluvuselelwe ngokuphelele noma izici ezintsha zohlelo lokusebenza lwezithombe.
Kodwa-ke, ukufika kuzo zonke lezi nezinye izici ezintsha ze-iOS 10, okokuqala kuzofanele sizijwayeze ukuvala isikrini esisha esishintshe ngokuphelele indlela esivula ngayo i-iPhone yethu futhi sisebenzisana nayo ngaphambi kokwenza kanjalo.
1 IOS 10, umuzwa omusha ngesikrini sokukhiya
1.1 Zula isikrini sokukhiya se-iOS 10
IOS 10, umuzwa omusha ngesikrini sokukhiya
I-iOS 10 iholele ekubuyekezweni kokuqala kokujula kwesikrini sokukhiya selokhu i-iPhone yokuqala yethulwa ngo-2007, njengoba 'iswayipha yokuvula' ethandwayo ishiyiwe. Manje kubonakala sengathi kuzoba lula ngandlela thile ukuvula isikrini, nakuba kungebona bonke abavumelana nohlelo olubekiwe.
Ngaphambi kwe-iOS 10, abasebenzisi be-iPhone 6s kanye nabasebenzisi be-6s Plus ikakhulukazi babhekane nokukhungatheka okuthile ngendlela yendabuko yokuvula ifoni, njengoba uhlelo lwe-ID olusheshayo lwaluvula i-terminal "ngokushesha okukhulu", okwenza abasebenzisi bavule ifoni. kungenzeka ukuthi ikusikrini esikhiyiwe.
Noma ekuqaleni kungahle kube yinkimbinkimbi, okwehlukile, IOS 10 isheshisa inqubo yokuvula kumatheminali ethuikakhulukazi kuma-iPhone 6s, 6s Plus naku-SE. Kuzo, ngisho nokugcina umunwe ku-Touch ID, i-iPhone iyavula kepha ayimisi ukukhombisa isikrini sokukhiya ngezaziso, ukugxeka okuyinhloko esikushilo ngaphambili.
Zula isikrini sokukhiya se-iOS 10
Ngisho nangaphambi kokudlula esikrinini sokukhiya, kunezici ezintsha kumamenyu wohlelo lwabasebenzisi be-iOS 10. Lezi zici ezintsha zizokhanga ikakhulukazi kulabo abathanda ukubhekabheka izinhlelo zabo noma ukuthatha isithombe.shesha ngaphandle kokuthi uvule i-iPhone yakho.
Ukuze uqalise, phakamisa i-iPhone yakho iye kuleveli yamehlo ukuze wenze kusebenze okuthi "Phakamisela ukuvula." Lokhu kwenzeka kuphela uma une-iPhone 6s, 6s Plus noma i-SE, njengoba lo msebenzi usebenza kubo kuphela (naku-iPhone 7s entsha). Ngaphandle kwalokho, cindezela inkinobho yokuqala.
Lapho isikrini sesivukile (asivuliwe), mane uswayiphele ukusuka kwesokudla uye kwesokunxele ukuvula ikhamera ye-iPhone uphinde uthathe isithombe noma urekhode ividiyo.
Ukubuyela esikrinini esikhulu sokuvala kusuka kwikhamera, cindezela inkinobho ethi Ikhaya. Uma uslayida umunwe wakho ukusuka kwesobunxele uye kwesokudla noma okuphambene nalokho, uzomane ushintshe phakathi kwezindlela ezahlukahlukene zesithombe nevidiyo (sengathi ikhamera ivuleke ne-iPhone ivuliwe).
Swayiphela ngakwesokudla kusuka kusikrini esikhulu sokukhiya ukufinyelela ikhasi lakho lewijethi. Kuyo uzothola wonke amawijethi ahambelana nezinhlelo zokusebenza ozilandile futhi ezihambisanayo.
Skrolela phansi ukuze ubone amawijethi amaningi.
Uma ufika ezansi uzobona inkinobho ethi "Hlela" ukuhlela kabusha, ukususa nokufaka amawijethi amasha esikrinini sokukhiya.
Uma uthatha isinqumo sokufaka imenyu yokuhlela, ngobumnene beka umunwe wakho kunkinobho yokuqala noma ufake iphasiwedi yakho lapho utshelwa.
Cindezela okuthi "Kwenziwe" uma usuqedile ukuhlela amawijethi akho, noma u- "Khansela" uma ushintsha umqondo.
Buyela esikrinini esimaphakathi ngokuswayipha ngakwesokunxele.
Njengoba ubona, ezinye izici ziyefana nokuthi besizenza kanjani kuze kube manje. Isibonelo, ukuhlela amawijethi, uma ufika kulesi sikrini esisha, kulandela inqubo efanayo naleyo esiyilandele ku-iOS 9. Ukuphela kwento eguqukayo yindlela esiya ngayo kulesi sikrini.
Kepha konke akugcini lapha, Isikrini sokukhiya se-iOS 10 siphethe ezinye izimfihlo ezimbalwa ukuthi, ngokuvamile, iguqula ngokuphelele ulwazi lomsebenzisi futhi ihambise kakhulu ukusetshenziswa kwayo. Kepha sizokutshela konke lokho engxenyeni yesibili yalokhu okuthunyelwe. Ungaphuthelwa!
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungayisebenzisa kanjani i-new iOS 10 lock screen (I)
Ukuthi ngikhubazekile okungangivumeli ukuthi ngibone iwigi enesikrini esikhiyiwe? Noma ayifanele i-iPhone 5?
Sawubona ungakhubaza amawijethi ku-iPhone 5S
IColumbus nePittsburgh sezivele zinolwazi ngokuhamba komphakathi